Galmee barreessaa akka biroosharii ykn kixiqqaatti maxxansuu dandeessa. Kana jechuun, kitaabessaan waraqaa tokkoratti garlamaan maxxansa, kanaafuu yeroo waraqaa dachaastu, galmee akka kitaabatti dubbisuu dandeessa.
Yeroo galmee akka birooshariitti maxxansuu barbaaddu, qabachiisa dhaabbataa fuulawwan fayyadami. Kitaabessaan yeroo galmee maxxansitu teessuma biroosharii fayyadama.
Faayilii - Maxxansii
Qaaqee Maxxansa keessatti, Amaloota cuqaasi.
Amaloota qaaqee keessatti maxxansaa keetiif, waraqaa qaabinsaa dalgessuuf qindeessi.
Maxxansaan kee yoo garlamee maxxanse, fi sababii birooshariin moodii dalgessa keessatti yeroo hundaa barreeffame, "duplex-short edge"fayyadamuun maxxansaa qaaqee qindeessaa keessatti qindeessuu qabda.
Maxxansaa kan hatattamaan fuula gara lamaanitti maxxansuuf, maxxansa fuulota mirgaa fi fuulota bitaa adda baasa.
Yoo LibreOffice fuulota tartiiba dogogoraatiin maxxanse, qaaqeeFilannoowwan maxxansaa bani, waljaldarbaafiladhu,sana boda galmicha irra deebi'ii maxxansi.
Title is: Biroosharii maxxansuu